Ny fifidianana marina ho an'ny filoham-pirenena amerikana dia sarotra sy sarotra. Na dia misy fiaviana ara-tantara azo hazavaina aza, farafaharatsiny amin'ny fomba eropeana, dia fahagola io.
Lisitry ny filoham-pirenena amerikanina rehetra
Ankoatr'izay, ny fifidianana ny filoham-pirenena amerikana dia miteraka fahitana mahamenatra maromaro amin'ny fomba fijery atiny ary manome ny tontolon'ny haino aman-jery manerantany miaraka amin'ny atiny. Nofariparitanay ny rafitra rafitra fifidianana any Etazonia any an-kafa.
Ity misy topy topin'ny filoha teo aloha tany Etazonia miaraka amin'ny antsipirian'ny fe-potoana iasan'izy ireo tsirairay avy:
Filohan'i Etazonia firy anarana Fe-potoana iasan'ny birao
Sarintany USA sy lisitry ny fanjakana
Sarintany USA handokoana ary hamolavola ny tenanao